काठमाण्डौ । घर एउटा यस्तो आरामदायी ठाउँ हुनुपर्दछ, जहाँ तपाइँले सुरक्षित महसुस गर्न सक्नुहोस् र दिन सकिएपछि आराम गर्न समय व्यतित गर्न सक्नुहोस् । २० औँ शताब्दीमा अपनाइएका विधि र सामाग्रीहरुले वास्तुकारहरुलाई ती ठाउँहरुमा पनि घर बनाउने मौका प्रदान गर्यो, जहाँ बसोबास गर्न मुश्किल लाग्ने गर्दथ्यो । अरुभन्दा भिन्न सोंच राख्ने...
काठमाण्डौ । एप्पलले विश्वकै पहिलो तैरिने रिटेल मोबाइल स्टोर उद्घाटन गरेको छ । यो स्टोर डोमको आकारको छ र यो पानीमा तैरिरहन्छ । कम्पनीका अनुसार नयाँ स्टोरको डिजाइन रोमको प्यानथिएनबाट प्रेरित रहेको छ । यसमा १५० जना कर्मचारी छन् र यिनीहरु विश्वका २३ भाषमा पोख्त छन् । यो स्टोर सिंगापुरको एप्पल मरिना स्यान्ड्मा अवस्थित छ । यो स्थान...
काठमाण्डौ । आफूले पाएको उपहारहरु कलेक्सन(जम्मा) गरेर राख्ने बानी कत्तिको छ तपाइँको ? यदि छैन भने अबदेखि यो बानीको विकास गर्न सुरु गरिहाल्नुस् । बेलायतमा एक व्यक्तिले आफ्नो बर्थडेमा उपहार स्वरुप पाएको ह्विस्की जम्मा गरेर लखपति बनेका छन् । बेलायतका २८ वर्षीय ती युवकले आफ्नो प्रत्येक बर्थ डेमा बुवाबाट उपहारस्वरुप पाएको ह्विस्की जम्मा...
काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ताका एक नेताले कोरोनालाई जितेका छन् । लगानीकर्ता दवाब समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन्द्र अग्रवालले हिजो आइतबार कोरोनाको युद्ध जितेका हुन् । एक महिनाअघि राति १२ बजे अचानक अग्रवालको मुख फुट्यो र बेहोस भए । तुरुन्त अस्पताल पुगेर चेकजाँच गर्दा सबै परीक्षण सामान्य आयो । डाक्टरले एमआरआई र हल्टर(मुटुको धड्कन...
काठमाण्डौ । बेलायतको लण्डनबाट भारतको दिल्लीसम्मकोे बस यात्रा ? तपाईलाई पत्याएर नलाग्न सक्छ अहिलेको यो हवाई मार्गको जमानामा बसमा यति लामो बस यात्राको कुरा गर्दा । तर अब चाँडै नै यी दुई देशबीच बस यातायात सेवा सुचारु हुन गइरहेको छ । यो अभुतपूर्व साहसिक बस यात्रा सन् २०२१ मा लञ्च हुनेछ । दुई देशबीचको यो बस रुटको दुरी २० हजार किलोमिटर...
भगवान गणेशसँग सिक्नुहोस् लगानीका यी मन्त्र, सुखसमृद्धिको वर्षा हुनेछ
काठमाण्डौ । गजानन(भगवान गणेशको एक नाम) को विराट शिरलाई उदार सोच र बुद्धिको प्रतिकको रुपमा लिइन्छ । बुद्धि, विद्या र ज्ञानका देवता, श्री गणेशले हामीलाई लगानीसँग जोडिएको कुनै पनि निर्णय लिनुपूर्व सदैव आफ्नो बुद्धि र विवेकको उपयोग गर्न प्रेरित गर्नुहुन्छ । यसका साथै राम्रोसँग विश्लेषण गरेर मात्रै लगानी गर्ने कुरामा समेत प्रेरित गर्नुहुन्छ...
लन्डन(रासस/एएफपी) । भारतीय स्वतन्त्रताका नायक महात्मा गान्धीले लगाएको सुनौलो चश्मा तीन लाख ४० हजार अमेरिकी डलरमा बेलायतमा बिक्री भएको लिलामसम्बन्धी काम गर्ने एउटा फर्मले जानकारी गराएको छ । ‘इस्ट ब्रिस्टल अक्सन’ नामक उक्त फर्मले शुक्रबार चश्मा विक्री भएपछि इन्स्टाग्राममा लेखेको छ,“एक भद्र व्यक्तिले आफ्नो काकालाई गान्धी आफैले...
काठमाण्डौ । कुकुरले सुँघेर कोरोना संक्रमित पत्ता सक्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ। जर्मनीका शोधकर्ताहरुले स्नाइफर डग अर्थात सुँघ्ने क्षमता प्रवल भएका कुकुरहरु कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन सफल भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले त्यस्ता कुकुरहरुलाई तालिम दिएर सुँघेरै कोरोना संक्रमित पत्ता लगाउन सफल भएको बताएका छन्। जर्मनीको ह्यानोभर...
काठमाण्डौ । जलवायुु परिवर्तनलाई नियन्त्रण गर्न थप प्रयास नगरिए यो शताब्दीको अन्त्यसम्म ‘पोलार बियर’ हरु पृथ्वीबाट लोप हुुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। नेचर क्लाइमेट चेन्ज जर्नलमा प्रकाशित एक अध्ययनको रिपोर्टमा यस्तो चेतावनी दिइएको हो। अनुुसन्धानमा संलग्न वैज्ञानिकहरुका अनुसार आर्टिक समुुद्रको हिउँ पग्लिँदा पोलार बियरका केही...
रासस/सिन्ह्वा । उडिरहेको विमान भित्र मंगोलियाकी एक महिलाले शुक्रबार बिहान दुई बच्चालाई जन्म दिएकी छिन् । टर्कीको राजधानी स्तानबुलदेखि मंगोलियाको राजधानी उलान बाटोरतर्फ गइरहेको बेला ४२ बर्षीया महिलाले जुम्ल्याहा बालिका जन्माएकी हुन् । जन्मिएका ती बच्चाहरु बालिका हुन भने ती महिला सामान्य अवस्थाभन्दा दुई महिना अगाडी नै सुत्केरी...
सुनैसुनले बन्यो विश्वकै पहिलो होटल, एक रात बसेको कति पैसा लाग्ला ?
काठमाण्डौ । सुनको मूल्यले दिन दिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । यस्तो बेलामा सुन वा सुनका गहना खरीद गर्नु निकै कठीन हुन्छ । तर, यस्तो अवस्थामा कुनै एउटा होटल सुनैसुनले बनेको छ भन्ने सुन्दा सबैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । यस्तो होटल जहाँका प्राय सबै सामानमा सुनको जलप लगाइएको छ । कतिपय सामान २४ क्यारेट सुनले नै बनेका छन् । भियतनाममा सुनै सुनले बनेको...
काठमाण्डौ। अमेरिकाको म्यासाचुुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एमआईटी) ले कोरोनाभाइरस नष्ट गर्ने रोबोट निर्माण गरेको छ। यो रोबटले आधा घन्टामा ४ हजार वर्गफुुट भएको गोदामको भुुइँलाई संक्रमण मुुुक्त गर्न सक्ने जनाइएको छ। यसको प्रयोग ठूला मल, स्कुुल, उद्योग कलकारखाना र विमानस्थलजस्ता स्थानहरुमा गर्न सकिनेछ। रोबोटको विकासका लागि...
काठमाण्डौ । जापानका एक व्यक्ति ‘निन्जा’ (एक किसिमको मार्सल आर्ट्स) कलामा मास्टर्स डिग्री हासिल गर्ने विश्वकै पहिलो छात्र बनेका छन्। जापानका ४५ वर्षीय जिनिची मित्सुुहासिल ती भाग्यमानी छात्र हुन्। उनले मार्सल आर्ट्सको आधारभूत कलाहरुका साथै सजिलैसँग पहाडहरु कसरी चढ्ने भन्ने विषयको ग्रयाजुुएट सकेपछि निन्जामा मास्टर्स डिग्री...
एउटा खास ढुंगा, जसले बनायो यी सामान्य उत्खननकर्मीलाई रातारात करोडपति
काठमाण्डौ । तान्जानिया एक सामान्य उत्खननकर्मी आफूले हात पारेका दुई बहुमूल्य ढुंगाबाट रातारात कडोपति बनेका छन्। ती भाग्यशाली उत्खननकर्मी हुन्, तान्जानियाको मन्यारा गाउँका स्यानिनियु लाइजर। यो उनको जीवनको ठूलो खोजमात्र बनेन, देशकै ठूलो खोजी पनि बन्यो। लाइजरले दुई कच्चा तन्जानाइट ढुंगा फेला परेका हुन्। जसको कुल तौल १५ किलो रहेको...
काठमाण्डौ । जनरल मोटर्स, बर्गर किङ, सीएनएन, उबर, एअरबीएनबीजस्ता कम्पनीमा के समानता हुन सक्ला ? यी सबैको स्थापना यस्तो समयमा भएको थियो कि जब कारोबार र अर्थव्यवस्थाको दृष्टिकोणबाट खराब समय चलिरहेको थियो। जनरल मोटर्सको स्थापना सन् १९०८ मा भएको थियो। त्यतिबेला अमेरिका सन् १९०७ को आर्थिक संकटपछिको उथलपुथलको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको...